DHAGAYSO:- Siyaasiga Faarax MacalinOo Ka Hadlay Wareejintii Qalbi-Dhagax & Sir badan uu banaanka soo dhigay | Faafan News
DHAGAYSO:- Siyaasiga Faarax MacalinOo Ka Hadlay Wareejintii Qalbi-Dhagax & Sir badan uu banaanka soo dhigay
Gudoomiye ku xigeenki hore Baarlamaanka Dalka Kenya Faarax Macalin ayaa marka hore sheegay in madaxda Ururka ONLF uu kala hadlay joojinta dagaalada ay wadaan si ay uga waantoobaan waxyaabaha ay ku hayaan Xabashida.
Waxa uu sheegay in Madaxdaas ay jawaab uga dhigeen in Soomaalida meelkasto oo ay joogaan ay ku tartamayaan dhiibidooda isla markaana waligeed lagu wareejin jiray Itoobiya.
Waxa uu sheegay in ay ku doodayaan in horay Maamulka Hargeysa ay u bixiyeen Dowladda Hadda jirta ee Federaalka ahna ay Dowladda Itoobiya ku wareejiyeen Cabdi Kariin Muuse Qali-Dhagax oo ka mid ah Madaxda Jabhada ONLF.
Faarax Macalin Gudoomiye ku xigeenki hore Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa sheegay in Qalbi-Dhagax markii uu joogay Soomaliya la dhibaateyn jiray balse haatan la keenay dalkiisa isla markaana uu ku jiro nolol raaxo leh sida uu hadalka u dhigay.
Wareejintii Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Cabdi Kariin Muuse Qalbi-Dhagax ayaa xiisad ka abuuray dalka,waxaana mudo ka badan laba Bilood ay noqotay mid laga hadal haayo Guud ahaan Soomaaliya iyo Caalamka intaba.
Hoos ka Dhageyso Codka Faarax Macalin.